Birgitta Ohlsson: Natiijadii ka soo baxday aftidii Iswiiserland ma ahayn mid lagu farxo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda Arrimaha Midowga Yurub Birgitta Ohlsson. Sawirle: Ola Westerberg/TT.
Dhinaca MAYAdu waxay ku doodayeen in haddii HAA guuleysato uu dhaawac weyn soo barwaaqada iyo dhaqaalaha Iswiiseland. Sawirle: Daniel Alling/Sveriges Radio
Halkudhegyadii dadka u codeeyey in shisheeyaha la joojiyo. Sawirle: Daniel Alling/Sveriges Radio
Birgitta Ohlsson: Natiijadii ka soo baxday aftidii Iswiiserland ma ahayn mid lagu farxo
La daabacay måndag 10 februari 2014 kl 14.49
Natiitajii ka soo baxday aftidii shalay laga qaadey dadweynaha Iswiiserland oo uu ku guuleystey dhinicii doonayey in la joojiyo dadka ka imaanaya dalalka Midowga Yurub waxay ahayd mid niyad-jab iyo murugo xambaarsan. Sidaasna waxaa tiri wasiiradda arrimaha Midowga Yurub Birgitta Ohlsson (FP):
- Haa oo hadda waxay u muuqataa in ay jirto sabab mustaqbalka dambe looga fiirsado xiriirka ka dhexeeya Midowga Yurub iyo dalka Iswiiserland. Waxaan waqtigaan xaadirka ku sugannahay marxalad ay Yurub u baahan tahay in xuduudaha dalalka la isu furo si aan kaalin door leh uga qaadanno taranka soo adkaadey oo caalamka ka socda. Xataa haddii aysan Iswiiserland xubin ka ahayn Midowga Yurub, waxay aad ugu xiran yihiin caalamka intiisa kale si ay u sii ahaadaan dal dhaqaale wanaagsan. Sidaas awgeed ayaan u arkaan in ay gaareen go’aan aad iyo aad looga murugoodo.
Dhinaca Haa iyo dhinaca Maya ayaa aad isu dhowaa, balse dhinaca Haa ayaa wax aad u yar ku adkaadey kadib markii ay xadkii boqolkiiba 50 dhaafeen xoogaa yar oo u dhiganta boqolkiiba 0.3.
Dhinaca Haa u ololeynayey waxaa ka mid ahaa xisbiga midigta fog oo in muddo ah uu hadafkooda ugu weyn siyaasadeed ahaa in la xaddado dadka ka imanaya Midowga Yurub oo soo gelaya Iswiiserland. Dhinacii u codeynayey Maya ayaa koobna xisbiyada kale ee siyaasadda iyo laamaha ganacsiga oo dadaal u soo galay sidii maya loogu codeyn lahaa.
Waxaa lagu qiyaasay in ay sannad walba Iswiiserland soo galaan 80 000 oo qof oo ka socda dalalka Midowga Yurub, badankoodna ay ka yimaadaan dalal ladan oo ay mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska iyo Bortuqaal.
Dowladda Iswiiserland ayaa hadda ku khasbanaan doonta in ay di buga la xaajoodaan Midowga Yurub heshiiskii dhaqdhaqaaqa isu furan ee dadka isaga goosha Iswiiserland iyo dalalka Midowga Yurub. Heshiiskaasina wuxuu muwaadiniinta midowga Yurub xaq u siinayaa in ay degaan dalka Iswiiserland.
Balse Marita Ulvskog oo ah xildhibaan xisbiga Socialdemokraterna u fadhiya baarlamaanka Midowga Yurub ayaa aamminsan in ay Iswiiserland ku adkaan doonto in ay isbeddelkaan hirgeliyaan.
Waxay qabtaa in habka afti-qaadiddu uu yahay hab aad u adag in laga isticmaalo dunidaan isu soo dhowaaneysa oo wax isdhaafsiga joogtada ahi ka dhex jiro:
- In afti loo qaado in ay dadweynaha Iswiiserland go’aansadaan in ay dunida ka mid noqonayaan iyo in kale, waa su’aal aan caqligal ahayn. Mana mid afti lagu go’aamin karo. Maanta waa ay adag tahay in la ogaado sidii ay go’aankaas u hirgelin lahaayeen. Waayo kama ay faa’iideysan doonaan suuq-hoosaadka ka dhexeeya dalalka Yurub mar haddii aysan dooneyn in dhaqdhaqaaqa dadku isu furnaado.
Siyaasi SD ka tirsan oo ka faalloday aftidii laga qaadey Iswiiserland